Featured – စာအုပ်မြို့တော်
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ပေါတောတော သူငယ်ချင်းလေးတွေရှိရင် သူတို့ကို တန်ဖိုးထားပါ… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Leadership တို့၊ Management တို့လို ပညာတွေကို မတတ်ဘူးဆိုရင် သင်ပေးလို့ရတယ်၊ အဲ့ဒီအတွက် သင်တန်းတွေရှိတယ်…သို့သော် စတတ်၊ နောက်တတ်တဲ့ အတတ်ပညာတို့ ပျော်တတ်ပါးတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တို့ ပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာပေးလေးတွေတို့ ပေါတောတော လုပ်ရပ်လေးတွေတို့ ရွှတ်နောက်နောက် စကားလေးတွေတို့ ကြောင်တောင်တောင် အတွေးအခေါ်လေးတွေတို့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဟာသဉာဏ်လေးတွေတို့ ကိုယ့်အပျော်ကို တစ်ပါးသူဆီပါ ကူးစက်စေတဲ့ စေတနာလေးတွေတို့ စတဲ့အရာတွေကလေ သုံးလပြတ်သင်တန်းတစ်ခု သွားတက်ပြီး ရှာလာလို့ မရပါဘူး… အဲ့ဒါတွေက တကယ်တော့ ပါရမီထူးတွေပါ အထူးသဖြင့် လောကကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့သူ အများစုမှာပဲ ရှိတတ်တဲ့ အထုံပါ… စဉ်းစားကြည့်လေ သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးက ကြီးလေပဲ၊ ဥပမာ ခရီးတစ်ခုထွက်တယ်၊ ဟိုလူကလည်း […]
Posted in: Featured, ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 05/09/2018
~~ဘဝဆိုတာ အချိုးအ​ကွေ့များတဲ့လမ်းတစ်​ခုလိုပဲ ​ဖြောင့်​ဖြူးတဲ့အချိန်​ရှိသလို ခက်​ခဲတဲ့အချိန်​လည်း ရှိတယ်​ ​အေးချမ်းတဲ့ အချိန်​ရှိသလို ​မောပန်းရတဲ့အချိန်​လည်းရှိတယ်​ သာယာတဲ့အချိန်​ရှိသလို ပူ​လောင်​ရတဲ့အချိန်​လည်းရှိတယ်​ ဘယ်​အ​ခြေအ​နေ မှာမဆို ကိုယ်​​ရောက်​​နေတဲ့ဘဝကို လက်​ခံနိုင်​ရမယ်​ ~~မင်း​အောင်​မြင်​​နေချိန်​မှာ လက်​ခုပ်​တီးအား​ပေးမယ့့်​သူရှိသလို မင်းမ​ကောင်း​ကြောင်းသတင်းလွှင့်​မယ့်​သူလည်းရှိမယ်​ မင်းရှုံးနိမ့်​ချိန်​မှာ ကူညီ​ဖေးမမယ့်​သူရှိသလို စိတ်​ချမ်းသာ​နေမယ့့်​သူ​တွေလည်း ရှိမယ်​ ဘယ်​လိုလူမျိုးနဲ့ကြုံ ကြုံ ဘယ်​အ​ခြေအ​နေ​တွေ​ရောက်​​ရောက်​ မင်းကိုယ်​မင်း ယုံကြည်​မှုအပြည့်​နဲ့ အားပြန်​​ပေးဖို့ရယ်​ ​ရောက်​​နေတဲ့​နေရာက​နေ ရပ်​တန့်​မ​နေဖို့ရယ်​က မင်းရဲ့ဝတ္တရားပဲ ~~အရှုံး​တွေကြုံ လာတိုင်း”ငါ့​လောက်​ကံဆိုးတဲ့သူရှိပါ့ဦးမလား”လို့ စိတ်​ပျက်​အားငယ်​​နေမယ်​ဆိုရင်​ မင်းရည်​မှန်းချက်​​တွေပြည့်​ပါ့ဦးမလား။ တစ်​ခါလဲကျတိုင်း ပန်းတိုင်​နဲ့ ပိုနီးလာပါလား ဆိုပြီး အားတင်း​ရှေ့​လျှောက်​စမ်းပါ။ ​ဝေဖန်​သံ ကဲ့ရဲ့သံ​တွေက အချိန်​အတိုင်းအတာ တစ်​ခုအတွင်းရပ်​တန့်​သွားကြမှာမို့ အသံတိုင်းကိုသာမင်းဂရုစိုက်​​နေရင်​ မင်းရဲ့စိတ်​ဓာတ်​​တွေ အမှိုက်​ထုပ်​လို ညစ်​ပတ်​နံ​စော်​​နေလိမ့်​မယ်​ ~~မင်းသိထားရမှာက “ကိုယ့်​ရဲ့​ပျော်​ရွှင်​မှု ဝမ်းနည်းမှု စိတ်​ချမ်းသာမှု​တွေဟာ ကိုယ်​တိုင်​ပဲ ဖန်​တီးလို့ရတဲ့အရာ​တွေပါ။သူတစ်​ပါး […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 05/09/2018
ငါးတန်းကျောင်းသားဘန်ဂျမင် ဟာ သူ့ကိုယ်သူ အတန်း ရဲ့ အညံ့ဆုံး အထုံဆုံးလို့ ထင်တယ်။ အတန်းဖော်တွေကလဲ ဘန်ဂျမင် ဟာ တို့ အတန်း ရဲ့အညံ့ဆုံး။ အတန်းပိုင် ဆရာမ ရဲ့ အတွေးမှာလဲ ဘန်ဂျမင် ဟာ အထုံဆုံး ကျောင်းသား တစ်ယောက်။ နှစ်ဝက် အဆင့်ဖော်ပြတဲ့ကဒ်ကိုအိမ်ကိုပြရတော့ မှတ်ချက် ။ ။ “ထူးခြားစွာ တိုးတက်မှုမရှိ (ညံ့)” တဲ့။ ဘန်ဂျမင်ကတော့ ကဒ်ကိုကိုင်ရင်းစဉ်းစားနေတဲ့ သူ့ အမေ ကို လေပြေလေးနဲ့ပြောတယ်။ “ဒါပြသနာ သိပ်မရှိဘူး မဟုတ်လား မေမေ” ဘန်ဂျမင့် အမေ ရဲ့ အတွေးကတော့ ကွဲပြားတာအမှန်။ ၃ တန်းသာအောင်တဲ့ ဘန်ဂျမင့် အမေ aတွးတာက ” ငါ့သားတွေ ဆင်းရဲတွင်းထဲက […]
Posted in: Featured, ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 03/09/2018
ကမ္ဘာမှာ Nokia ကျရှုံးသွားတာ လူတိုင်းသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ သူ့ရဲ့ CEO နောက်ဆုံး ပြောသွားတဲ့ စကားလေးက သိပ်ကောင်းတယ် ။ ….တွေးစရာ ကောင်းတယ် ။ We did’t do anything wrong , but somehow we fall. “ငါတို့ အမှားမလုပ်ခဲ့ဘူး ဒါပေမယ့် ငါတို့ ကျရှုံးခဲ့တယ်” ။ #Rajeev Suri (CEO Nokia) ….တစ်ခါတစ်လေ လောကမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာအမှားမှ မလုပ်ဘူး ….။ .ကိုယ့် Skill တွေလည်း မလျော့သွားဘူး ။ ….ဒါပေမယ့် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ …., ” အမှားမလုပ်ရုံနဲ့ ၊ အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကို […]
Posted in: FeaturedCommentMM Book City	 03/09/2018
(၁)*မျှော်လင့်ချက်သာရှိပါစေ ဘ၀ဆိုတာရှင်သန်လို့အကောင်းဆုံးအရာတွေပါပဲ။ (၂)*သူပြုံးမှကိုယ်ပြုံးမဲ့အစား ကိုယ်ကစပြီးပြုံးလိုက်ပါ။ (၃)*လွယ်တယ်ဆိုပြီးမပေါ့ပါနဲ့ ဘ၀ရဲ့သီအိုရီမှာအသေးအဖွဲဆိုတာ မရှိပါဘူး။ (၄)*ယုံကြည်မှုရှိမှအရာရာတိုင်းကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့စွမ်းအားနဲ့သတ္တိရှိမှာပါ။ (၅)*မစဉ်းစားပဲလုပ်လိုက်တာမှန်သွားရင်တောင်အကြိမ်တစ်ရာမှာတစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်မှာပါ။ (၆)*ဖန်ခွက်ထဲမှာရေတစ်စက်ရှိတာဟာလုံးဝမရှိတာထက်စာရင်တော်ပါသေးတယ်။ (၇)*ကံတရားပါကွာလို့ပြောနေသရွေ့ ဥာဏ်သမားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ (၈)*စေတနာသည် ကံတရား၏အရင်းအမြစ် ဖြစ်သည်။ (၉)*သံသယပျောက်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်လမ်ကတော့ လုံးဝယုံကြည်ဖို့ပဲ။ (၁၀)*ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးမှ ကိုယ်ချင်းစာမယ်ဆိုရင်တော့မင်းဟာလူမိုက်ပဲ။ (၁၁)*ကံကြမ္မာဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတောင်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်။ (၁၂)*လိုအပ်တဲ့အခြေနေတွေအားလုံးပြည့်စုံမှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးထိုင်စောင့်နေတဲ့သူဟာအလကားအချိန်ဖြုန်းနေတာပါပဲ။ (၁၃)*လူတိုင်းဟာအမှားနဲ့မကင်းပေမဲ့ ခဏခဏတော့မမှားသင့်ဘူးလေ။ (၁၄)*ဘ၀ဆိုတာပညာရေးဖြစ်ပြီး လူအဖွဲ့အစည်းကတော့ကျောင်းပါပဲ။ (၁၅)*ဒုက္ခအနီးတွင် သုခရှိ၏။ (၁၆)*ဘ၀မြင့်သွားပေမဲ့ ဘ၀င်မမြင့်ပါစေနဲ့။ (၁၇)*ရိုးသာမှုကိုထိခိုက်လာရင် မာနဆိုတဲ့လက်နက်ကိုထုတ်သုံးရလိမ့်မယ်။ (၁၈)*ဘ၀ဆိုတာ အစမ်းသဘောအဖြစ် နေထိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အရာပါ။ (၁၉)*ပျက်စီးခြင်းတွေထဲမှာဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးကတော့ စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးခြင်းပါပဲ။ (၂၀)*အချစ်တွက်နဲ့အသက်ပင်သေသေဆိုပြီးဂုဏ်ယူမနေကြပါနဲ့ အဲဒါမိုက်ရူးရဲဆန်တာပါပဲ။ (၂၁)*နားလည်မှုရှိနေသရွေ့ မေတ္တာတရားဆိုတာမွေးဖွားနေဦးမှာပဲ။ (၂၂)*ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ အပြုံးဟာအခြေခံအကျဆုံးအရာပါပဲ။ (၂၃)*ဒေါသရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အမှားဆိုတာအမြဲဒွန်တွဲနေလျှက်ပါ။ မေတ္တာဖြင့်… #TKW ( 21 Feb 2017 ) #Credit […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 01/09/2018
❖ မျက်မှန်ကို ဒီနေ့မှ စတပ်တဲ့သူဟာ သူ့နှာခေါင်းပေါ်မှာ မျက်မှန်ရှိနေတာကို အချိန်ပြည့် သတိထားမိနေတယ်။ နေရတာ မလွတ်လပ်ဘူး။ ခဏခဏ မျက်မှန်ကို ချွတ်ကြည့်တယ်။ တပ်ကြည့်တယ်။ မျက်မှန်ကို မကြာမကြာ အဝတ်နဲ့ သုတ်တယ်။ ❖ ဒါပေမယ့် မျက်မှန်တပ်တာ ကြာသွားတဲ့အခါ မျက်မှန်တပ်ထားမှန်း မသိတော့ဘူး။ မျက်မှန်ဟာ ကိုယ့်မျက်နှာရဲ့အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလို ဖြစ်သွားပြီ။ မျက်မှန်တပ်ထားတယ် ဆိုတာကို မေ့ထားလို့ရသွားပြီ။ ❖ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူ စေတနာကောင်းတဲ့သူဟာ သူ့ကိုယ့်သူ “ငါ စိတ်ကောင်းရှိတယ် ငါ စေတနာ ကောင်းတယ်”လို့ မတွေးတော့ဘူး။ ❖ အဲဒီလို တွေးနေသေးတယ်ဆိုရင် စိတ်ကောင်း တကယ် မရှိသေးဘူး။ စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။ လုပ်ယူနေရတဲ့အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။ ❖ စိတ်ကောင်းရှိတာဟာ […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 29/08/2018
ကိစ္စတိုင်းကို နင်မှားတယ်၊ ငါမှန်တယ် လုပ်စရာမှမဟုတ်တာ။ အိမ်သူအိမ်သားနဲ့ စကားနိုင် လုတယ်၊ လုလို့နိုင်သွားတယ် ၊ ၅၂၈ လျော့သွားတယ်။ ချစ်သူနဲ့ စကားနိုင် လုတယ်၊ လုလို့နိုင်သွားတယ် ၊ ၁၅၀၀ လျော့သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားနိုင် လုတယ်၊ လုလို့နိုင်သွားတယ် ၊ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ် လျော့သွားတယ်။ လုတာက ခဏနေမေ့မယ့်ကိစ္စ၊ ရှုံးတာက သံယောဇဉ်၊ နာကျင်တာက မိမိကိုယ်ကို။ အဖြူက အဖြူ၊ အမည်းက အမည်းပဲ.. အချိန်က သက်သေပြသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ယူသန်ခေါင်းမာတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက်ပြီး လူလုပ်ပါ။ ကိစ္စအချို့ကို အရှုံးပေးတာ လူ့ဘဝအနေနဲ့နိုင်ပါတယ် ။ ပြေလည်မှု တစ်ခုပေးလေ၊ နွေးထွေးမှု တစ်ခုရလေ။ အချက် (၉)ချက်စလုံးဖတ်လို့ နားလည်သွားရင် လူဖြစ်ရတာ ပျော်လာမှာပါ။ ၁။ […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 26/08/2018
ကိုယ့်ဘ၀မှာ စိတ်တူကိုယ်တူ အမြဲပေါင်းသင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲလို့ လက်ချိုး ရေတွက်ကြည့်ဖူးပါသလား.. ? ကိုယ်နဲ့ အခုမှ ခင်မင်ရင်းနှီးပေမဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပေါင်းလာတဲ့ ငယ်ပေါင်းလို ဘာမဆို ဖွင့်ပြော တိုင်ပင် မျှဝေလို့ ရနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကော ရှိဖူးလား…? ရှိတယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးပါ။ ကံတရားက ဆန်းကြယ်တယ်။ ကိုယ်မထင်မှတ်၊ မမျှော်လင့်တဲ့ အချိန်မှာ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ဆီ အရောက်ပို့လိုက်တယ်။ အဲဒီလူက ကိုယ်မျှော်လင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရောက်မလာတတ်ဘဲ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုယ်က တန်ဖိုးထားရ ကောင်းမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို တန်ဖိုးထားပါ။ သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူရီးစားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့တုန်း၊ ဆုံတုန်း သူတို့ကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကံပါလို့ […]
Posted in: Featured, ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 22/08/2018
သူတစ်ပါးကို ဘယ်တော့မှ အပြစ်တင်မစောလိုက်ပါနဲ့ သူ့မှာ သင်မသိတဲ့ အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ် ။ သူတစ်ပါးကို ဘယ်တော့မှ အထင်မသေးလ်ိုက်ပါနဲ့ သူ့မှာ သင်မသိတဲ့ ကြီးမြတ်မှုတွေ ရှိနိုင်တယ် ။ သူတစ်ပါးကို ဘယ်တော့မှ မစွပ်စွဲလိုက်ပါနဲ့ သူ့မှာ သင်မသိတဲ့ အမှန်တရားတွေ ရှိနိုင်တယ် ။ သူတစ်ပါး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို ဘယ်တော့မှ မပုတ်ခတ်လိုက်ပါနဲ့၊ သူ့မှာ သင်မသိနိုင်တဲ့ ရုန်းကန်ဖြတ်သန်းမှုတွေ ရှိနိုင်တယ်။ သူတစ်ပါးအကြောင်းကို သင် တစ်ခါ မကောင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်း သင့် စိတ်နဲ့ခန္ဓာက စွမ်းအားတွေ ယုတ်လျော့နေတာကို သင်သိပါသလား ။ သူတစ်ပါးအပြစ်ကို ရှာခြင်းထက် ကိုယ့် လိုအပ်ချက်ကိုရှာဖွေ ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့သူကသာ တချိန်မှာ အောင်မြင် မှုတစ်ခုခုနဲ့တင့်တယ်တောက်ပရစမြဲဖြစ်ပါတယ် ။ လောက နိယာမတရားက သင့်စိတ်ထားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ နေရာတစ်နေရာကို သင့်အတွက် […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 22/08/2018
“ဘ၀​နေနည်း နည်းလမ်း ​ ( ၁၀ )မျိုး “
( ၁ ) ဘယ်​​တော့မှ ပိုက်​ဆံ​မ​ချေးပါနဲ့ ။ ​ဆောင်​ပုဒ်​​လေးတစ်​ခုရှိတယ်​ ။ – ​တောင်းမှ​ပေးတာ လူမိုက်​ – မ​တောင်းဘဲ​ပေးတာ လူလိမ္မာ – ​တောင်းလည်းမ​ပေးတာ လူယုတ်​မာ ဒါ့​ကြောင့်​ ပြင်​ပ​ဘေးသူစိမ်း​တွေနဲ့ မယုံကြည်​ရတဲ့သူ​တွေကို တက်​နိူင်​သမျှပိုက်​ဆံ​မ​ချေးပါနှင့်​ ။ ​ငွေ​ကြေးဥစ္စာဟာ နည်းသည်​ဖြစ်​​စေများသည်​ဖြစ်​​စေ ​ချေးငှား​ကြသူတိုင်းဟာ ပြန်​ပြီးလိုချင်​ကြစမြဲပါ ။ ပြန်​မဆပ်​ခဲ့ဘူးဆိုရင်​ ရင်​ထဲမှာ အစိုင်​အခဲ​လေးတည်​​နေတတ်​ပါတယ်​ ။ ကိုယ်​တကယ်​ချစ်​တဲ့သူ​တွေအတွက်​ဆိုရင်​ ရက်​ရက်​​ရော​ရောသာ ​ပေးကမ်းကူညီ​ပေးလိုက်​ပါ ။ ( ၂ ) လိုအပ်​လျှင်​အဆင်​သင့်​ ဖြစ်​​အောင်ပိုက်ဆံ​ပုံမှန်​စုပါ ။ ကျွန်​​တော်​တို့ဟာ ဘယ်​အချိန်​မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခ​တွေကြုံမလဲ ဘယ်​အချိန်​မှာ အနာတရဖြစ်​မလဲ ဆိုတာ ကြိုပြီး ​မသိနိူင်​ပါဘူး ။ ဒီလိုအ​နေအထားမျိုး​တွေ တကယ်​ဖြစ်​လာခဲ့ရင်​ အခက်​အခဲ​တွေကို တစ်​ဖက်​တစ်​လမ်းမှ ​ဖြေရှင်းဖို့ […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 21/08/2018